Dagaal culus ayaa saaka waabarigii hore ka dhacay deegaanka Garas-weyne iyo Moora-Gaabey oo ku dhow degmada Xudur – STAR FM SOMALIA
Dagaal culus ayaa saaka waabarigii hore ka dhacay deegaanka Garas-weyne iyo Moora-Gaabey oo ku dhow degmada Xudur
Wararka ka imaanaya Gobolka Bakool ayaa sheegaya in dagaal culus uu saaka waabarigii hore ka dhacay deegaanka Garas-weyne iyo Moora-Gaabey oo ku dhow degmada Xudur.
Sida ay sheegayaan wararka dagaalka ayaa bilowday markii dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen saldhig ciidamada dowladda ku lahaayeen deegaankaas, waxaana la soo sheegayaa inuu jiro dhimasho fara badan oo ku dhow 50-ruux.
Guddoomiye kuxigeenka degmada Xudur ayaa sheegay in dagaalka ka dhacay deegaanka Garasweyne uu socday muddo saacad ka badan, isla markaana lagu soo qaaday ciidamada oo difaacyadooda ku jiray, isla markaana ay khasaare xoogan u geysteen Al-Shabaab.
“Dagaalka labo goobood ayuu ka dhacay, Garas-weyne iyo Moora-Gaabey, inta aan xaqiiqada ah, waxaa ka dilnay Al-Shabaab 53, labaatameeyo waa dhaawacnay, waxay rabeen sida weeraradii Shabeellaha Hoose ku qaadeen oo kale inay nagu soo qaadeen, laakiin ciidamada xooga dalka ayaa guulo ka soo hoyay, waana laga adkaaday”ayuu yiri Guddoomiye kuxigeenka degmada Xudur.
Sidoo kale Guddoomiye kuxigeenka Xudur ayaa sheegay in intii dagaalka socday ay dhaceen dhowr qaraxyo ay fuliyeen rag waxyaabaha qarxa xirnaa, isagoo xusay in ciidamada oo feejignaa ay u suura gashay inay toogtaan sida uu hadalka u dhigay.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya inuu deegaanka ka dhacay dagaal xoogan oo dhimasho iyo dhaawac sababay, kaasoo labada dhinac ay isu adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan.
Ma jirto wax war ah oo ka madax banaan sheegashada Mas’uulkan, iyadoo goor sii horeysay baraha Internet-ka ee taageera Al-Shabaab lagu sheegay in dagaalyahanada Al-Shabaab ay la wareegeen deegaanka Moora-Gaabey iyo deegaano kale oo ku dhow Xudur.
Ciidamadda Xoogga dalka Soomaaliyeed S/G Maxamed Aaden Axmed ayaa maanta kormeer howleed ku tagay Xerada Jazeera ee duleedka magaalada Muqdisho
Baarlamaanka Maamulka Jubbaland ayaa maanta waqti kordhin u sameeyay xilliga uu Madaxweynaha maamulkaas Axmed Madoobe ku soo magacaabayo Golaha Wasiirada